Gmail maka iOS ọkọkpọhi a isi update ma ndị ọrụ na-adịghị enwe obi ụtọ - News Ọchịchị
Gmail maka iOS ọkọkpọhi a isi update ma ndị ọrụ na-adịghị enwe obi ụtọ
Ịntanetị nnukwu Google ka a tọhapụrụ a isi update maka Gmail ngwa n'ihi na iOS na akpatre eweta ndabere tuondu ka email ahịa, ma ya ọrụ adịghị enwe obi ụtọ banyere ya.
Google mara ọkwa update on Wednesday, ekpughe na Gmail maka iPhone na iPad oru ugbo a ndabere tuondu feature, nke pụtara ozi ịntanetị ga- “tupu N'ubochi” na njikere ele mgbe ị na-emeghe ngwa.
Google software engineer Melissa Dominguez kwuru na a blog post ụnyaahụ, “Ma ị na-achọpụta na gị email ihe mbụ ụtụtụ ma ọ bụ dị ka ị na-eche na akara na nri ụlọ ahịa, ị chọrọ inwe ozi gị dị ka ngwa ngwa dị ka o kwere. Na taa update ka Gmail iOS App, na ọ dị mfe ime otú ahụ.”
A ọhụrụ mma na-achọ iOS 7, na ọrụ ga-mkpa nwere “ndabere ngwa tuondu” Switched on. Otú ọ dị, ụfọdụ pụrụ achọghị inye nsogbu, dị ka ọrụ nke update ngwa ndidi ngwa ekwupụta mwute ya na ngwa ahịa, na ụfọdụ na-asị na ọ na-ewute ha ndụ batrị.
One enweghị obi ụtọ na Gmail onye ọrụ si, “Nke a update gụnyere ndabere ngwa-enye ume ọhụrụ na ya gburu m ndụ batrị nnọọ ngwa ngwa. The ike nke ngwa bụ ka mma, ma aghaghị m gbanyụọ ndabere tuondu m batrị hà.”
The Gmail maka iOS update na-ewetakwara gị nkwado maka na ịbanye gafee multiple Gmail iOS ngwa ọdịnala na ọrụ.
“Gmail ngwa na-now-akwado banye-in gafee Google iOS ngwa ọdịnala, gụnyere map, Drive, Youtube na Chrome,” Google kọwara. “Banye na otu, na ị ga-banyere ka ihe niile (a na-arụ ọrụ maka ịbanye si). Ya mere, ị ga-enweghị ka pịnye ke na 27-agwa paswọọdụ ma ọ bụ weghachite gị 2-nzọụkwụ nkwenye koodu oge ọ bụla ị ịnyagharịa ọzọ Google ngwa.”
Otú ọ dị, ọrụ na-adịghị oke enwe obi ụtọ banyere nke a ma, na ụfọdụ na-ekwu na mma a na-adịghị arụ ọrụ.
“Ebe ọ bụ na m na-emelite ngwa ọ na-aba na-egbu osisi m na na ọ bụ ọtụtụ iji nwayọọ karịa tupu update,” otu miffed onye ọrụ dere, sị.
Repost.Us – Republish a Nkeji edemede
Akụkọ a, Gmail maka iOS ọkọkpọhi a isi update ma ndị ọrụ na-adịghị enwe obi ụtọ, na-syndicated si The Inquirer na-ezitere ebe a na ikike.
20924	0 App Store, Gmail, Google, Inquirer, IOS, Emmanuel, iPhone, YouTube
← 10 Irè Natural ịgba akwụkwọ maka Heart Diseases 'Ọ dịghị mgbanwe’ na Schumacher ọnọdụ →